Mi Accout Password မသိ၊ email မသိ၊ Phone SIM မရှိ၊ ဘာမသိ ညာမရှိတွေကြောင့် firmware မတင်ရဲ၊ Factory Reset မချရဲ ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုလျှင်
saveSave Mi Accout Password မသိ၊ email မသိ၊ Phone SIM မရှိ၊... For Later
တာရာမင်းဝေ - တကိုယ်တော်ရေးတဲ့ ကကြီးခခွေး
AutoCAD Module 4
AutoCAD Module (2)
Aww Pi Kyal----Lu Ngal toaNar Gat
ခင်မျိုးချစ် ချစ်ဦးညို လောကဇာတ်ခုံ
ဂျူနီယာဝင်း - ၁၂ လရာသီ ပန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
Khin Myo Chit -Taung Pyaung Htwe Lar
ခင်မျိုးချစ်၊ ချစ်ဦးညို - လောကဇာတ်ခုံ ဇာတ်ခုံလောက
Chit Oo Nyo - wi thar khar and thida
ချစ်ဦးညို - ဒုဌဂါမဏိ
Mi Accout Password မသိ၊ email မသိ၊ Phone SIM မရှိ၊ ဘာမသိညာမရှိတွေကြောင့်firmware မတင်ရဲ၊ Factory Reset မချရဲ ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုလျှင်
ဖုန်းကတော့သုံးလို့ရနေသေးပြီး password မသိတော့သော mi account ကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေသော user များအတွက်ပါ။ Posts တွေ Ments တွေမှာ mi acc password မေ့တယ်ဆိုရင်acc လုပ်တုံးက သုံးတဲ့email, ph no
ပဲတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်လဲ ထိုနည်းကိုပဲ ဖြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနည်းကိုတစ်ခါမှမတွေ့မိခဲ့လို့
သိသူများကျော်သွားရန်၊ မသိသေးသူများ စမ်းသပ်နိုင်ရန်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
xiaomi ကပြန်ပို့လာတဲ့verify code no လေးပြန်ဖြည့်ပြီး password ချိန်းလိုက်လို့ဖြေကြတာတွေ
Lock ကျလို့၊ Factory reset ချမိလို့ lock မိနေတဲ့ဖုံးတွေအတွက်တော့သည်နည်းက သိပ်အသုံးမတည့်လှဘူးပေါ့။ normal
http://account.xiaomi.com ကိုဝင်ပါ။ အောက်နားလေးမှာ Forgot Password ဆိုတာတွေ့ပါမယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံ- ၁
Email or Phone no ထည့်ပေးဖို့ တောင်းပါတယ်။ မထည့်ပဲ ကိုယ့်Mi Account ID ကိုထည့်လိုက်ပါ။ Next Button နှိပ်ပါ။ [Mi ID ကိုဖုန်းရဲ့ Settings->Mi Account ထဲဝင်ကြည့်ပါ။ အပေါ်ဆုံးမှာ နံပါတ်၁၀ လုံးနဲ့တွေ့ပါမယ်။] ပုံ- ၂
ကိုယ့်Mi Account နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့phone no ဆီcode ပို့မယ်ဆိုတာပေါ်လာပါမယ်။ ဖုံး sim card လဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့Not Working? ဆိုတာလေးကိုClick လိုက်ပါ။ ပုံ- ၃
မိမိMi Account မှာ email ပါထည့်ထားပေးခဲ့ရင်email နဲ့ verify လုပ်မလားဆိုပြီးလာမေးပါမယ်။ email ဆိုတာလည်းမသိ၊ မရှိဆိုတော့ဘာမှမရွေးပဲ Manual Verification လေးကိုသာ click လိုက်ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပဲထားပြီး Mi Acc လုပ်ခဲ့ရင်တော့အခုအဆင့်တောင်းမှာမဟုတ်ပါ။ ပုံ- ၄
မိမိMi account နဲ့ ပတ်သက်တဲ့hints လေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး Manual verification ကိုစတင်ရန်Get Started button ကိုclick ပါ။ ပုံ- ၅
Verification စပါပြီ။ ပထမဦးစွာ မိမိဆီsms အရင်ပို့ပေးပြိး အခြားအဆင့်တွေဆက်မှာဖြစ်လို့ ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပေးရပါမယ်။ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ လက်ထဲတွင်အသင့်ရှိလို့ sms ကြည့်နိုင်မယ့်နံပါတ်ဖြစ်ရပါမယ်။ Mi Acc ဖွင့်ထားပြီး ယခုနံပါတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ sim card ကိုmi phone ထဲမှာထည့်ထားရန်လဲမလိုအပ်ပါ။ sms ချက်ချင်းဖွင့်ကြည့်နိုင်လျှင်ရပါပြီ။ ပုံ- ၆
ပို့လာသော sms verification code ကိုပြန်ဖြည့်လို့ နောက်တစ်ဆင့်သို့သွားပါ။ ပုံ- ၇
မိမိဖုန်းရဲ့ unique ID တွေထည့်ပေးရပါမယ်။ IMEI, Wifi MAC Address နဲ့ Phone Model ကိုဖြည့်ပေးပါ။ IMEI ဘယ်လိုကြည့်ရမယ်။ Wifi Mac Addr ဘယ်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုhints လေးတွေပေးလို့ညွှန်ပြထားပါတယ်။ IMEI နှစ်ခုပါတဲ့ဖုန်းများအတွက်+ အလုံးလေးနှိပ်လို့ ဖြည့်စရာနောက်တစ်ကွက်ပေါ်လာပါမယ်။ ပုံ- ၈
အသစ်ထည့်ပါ။ မှတ်သားထားပါ။ 3. စောနက verify sms အတွက်သုံးခဲ့တဲ့နံပါတ်ပဲပြန်ထည့်ပါတယ်။ မှတ်ထားပါ။ sim ကတ်ထည့်ထားတဲ့handset ကိုready ဖြစ်နေပါစေ။
1. Password အသစ်ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ သေချာမှတ်သားထားပါ။ 2. Email
Mi account အသစ်လုပ်သလိုemail or ph တစ်ခုပဲထည့်ပေးလဲရမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့
နှစ်ခုလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်။ email နဲ့ ph no ကိုလည်း mi account မဖွင့်ရသေးတဲ့email, ph no ကိုသုံးထားပါတယ်။ ပုံ-
ပြိးရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံပါပြီ။ working days3ရက်အတွင်း confirmed ပါမယ်ဆိုထားပါတယ်။ ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့email,
ph no ဆီကိုpassword အသစ်တစ်ခုcreate လုပ်ပြီးပေးလိုက်မလား။ ပုံ- ၉ မှာပေးခဲ့တဲ့password ဆိုတာနဲ့
သုံးလို့ရပြီလားဆိုတာ အကြောင်းပြန်မလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ ကျနော်လည်း အခုစာကိုရေးဖို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ acc တစ်ခုနဲ့ယနေ့မှစမ်းလိုက်တာဖြစ်လို့ စောင့်ကြည့်ပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ။ ပုံ- ၁၀
ယခုဆိုလျှင်ဖုန်းသုံးလို့ရနေသေးသော်လည်း email ဆိုတာလည်း မသိ၊ မရှိ။ SIM card ကလည်း ပျောက်ခဲ့ပြီသို့မဟုတ် ဆိုင်ကလုပ်ပေးခဲ့တာ သူတို့လည်းမမှတ်မိတော့ပြီဖြစ်သော Mi accout ကိုPassword reset ချလို့သုံးနိုင်ပါပြီ။ Xiaomi က update info ပြန်ပို့လာချိန်တွင်မိမိတို့ email, ph no များကိုMi account တွင်assign လုပ်ထားလို့ မိမိစိတ်ကြိုက် password လည်း ထားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Mi Fans များအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ…
More From Glzxy
ချစ်စံဝင်း ဖီစီးမူနဲ့ အတူနေခြင်း
You Known IP Address How to Hack by Www.pyaephyo.com